हाय प्रेमिका !
भनीहालाैँ, त्यसबेला मलाई आफूले गरेको प्रेम र प्रेमिकाप्रति असाध्यै घमण्ड थियो । अझ नढाँटी भनौँ ! आफूमै पनि खुबै घमण्ड गर्थेँ म- राम्रो छु । राम्री केटी पाउँछु । पाएकीले मबाहेक अरुलाई हेर्नु नै पर्दैन । मसँग जोडिइसकेपछि मैले नचाहँदासम्म उसले सम्बन्ध तोड्नुपर्दैन । म अरु केटाजस्तो होइन, अरुभन्दा विशेष हुँ आदि इत्यादि । यही घमण्डमाथि त्याे दिन सायद भगवानको नजर परेको थियाे । र, मलाई साइजमा ल्याउन चाहन्थे ।
बिहानबिहानै बासी भात भुटेर खाएको दिन के राम्रो हुन्थ्यो !
अंग्रेजीमा भनाइ छ, ‘मर्निङ सोज द डे ।’ बिहानै बेस्सरी बासी भात हानेपछि दिन नै दलका नेताहरूले गर्ने समृद्धिको भाषणजस्तै ‘बकवास’ हुन पुगेछ ।
गाउँतिर त बासी भात खाएको थाहा मात्रै पाए भने नाम राख्दिहाल्छन् ‘बासीभाते’ । राँगा बेच्नेलाई थरको अगाडि ‘राँगे’ थप्दिन्छन् । झोला बोकिरहनेलाई थरको अगाडि ‘झोले’ भिराइदिन्छन् ।
गाउँमा एक जना गोरु किनबेच गर्ने सुवेदी दाइको नामै ‘गोरु सुवेदी’ राखिदिएका थिए । त्यस्तै हो, भाटाको काम गर्नेलाई ‘भाटे‘, माटाको काम गर्नेलाई ‘माटे’ ।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ, यी गाउँलेले नाम राख्ने कुरामा पीएचडी नै गरेका छन् ।
ताजाताजा लभ परेको थियो । प्रेमिका भेट्न राजविराजसम्म जानु थियो । जाने क्रममा बेलका मूर्तिखोलापारि ६० वर्षजतिका देखिने एक वृद्ध मान्यजनले मोटरसाइकल रोक्न ट्राफिकले जस्तै हात तेर्स्याए ।
रोकौँ कि नरोकौँ हुँदै अलि पर पुगेर मोटरसाइकल रोकेँ । ‘भाइ कहाँ हिँडेको ?,’ ठाडो प्रश्न गरे ।
मैले राजविराज हिँडेको भनेर उत्तर दिएँ ।
ती बुढा मेरो अनुमतिको ख्याल नै नगरी आएर मोटरसाइकलको पछाडि बसे ।
त्यति मात्र हो र ! ‘ल म पनि त्यहाँ फत्तेपुरसम्म जानु छ, हिँड’ भन्दै आदेश पनि दिए ।
म जिल्ल परेँ । के खालको मान्छे होला ! मेरै मोटरसाइकलमा चढेर मलाई नै आदेश ?
मानौँ, उनी मेरा छुच्चा पिता थिए, जसको कमाइले मैले मोटरसाइकल किनेर चढ्न पाएको छु र उनले मेरो स्वीकृति वा सहमतिका लागि सोधिरहन जरुरी छैन ।
हुन त म पनि गाउँकै मान्छे हुँ । गाउँमै जन्मिएको हुँ । तर, यी गाउँका मान्छे सिक्ने कुरामा एकरति ख्याल गर्दैनन् । बोलाइमा अलिकति पनि सभ्यताको हेक्का राख्दैनन् ।
फोन उठाए भने भन्छन्, ‘हलो को बोलेको हाँ ? किन फोन गरेको ?’ आफूले फोन गरे भने झन् ल्याङ गर्छन्, ‘मलाई नचिनेको ? लौ अझै नचिनेको ? अन्दाज लाउनु त !’
एकपटक सभासद् नारायण खड्काको घरमा हामी केही युवा र खड्का बसेर चिया पिउँदै थियौँ । गाउँकै विकासबारे कुरा चल्दै थियो । वर्षौंदेखि अलपत्र परेको गिँदेरी पुलको निर्माण कार्यलाई निरन्तरताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै हामी गोल्फुटार पुगेका थियौँ । त्यतिबेला खड्का शहरी विकासमन्त्री थिए ।
हामीसँग कुरा गर्ने क्रममा उनलाई निकै फोन आइरहेको थियो ।
गाउँबाट एक जना काठमाडौं आएका रहेछन् । सायद उदयपुरकै ठोक्सिलाबाट । तिनै व्यक्तिले खड्कालाई फोन गरेका रहेछन् । खड्काले फोन उठाए ।
उनले फोनकर्ताबाट सकेसम्म छिट्टै कुराको अपेक्षा गरेका थिए । तर, उताबाट आवाज आयो, ‘डाक्टरसा’प कहाँ हो ?’
खड्काले जवाफ फर्काए, ‘म घरमा हो । भन्नुस् त, को बोल्नुभो ?’
ती फोनकर्ताले प्रतिप्रश्न पो गरे, ‘हैन मलाई चिन्नुभएन भन्या ?’
‘चिनिनँ भन्नुस् न !’, खड्काले हामीतिर अर्को जवाफ दिए ।
‘हत्तेरी ! डाक्टरसा’प चुनावको बेला मात्र चिन्ने ? अन्दाज लाउनु न !’, फोनकर्ताले कुरा लम्ब्याउने प्रयास गरे ।
त्यति व्यस्त समयका बाबजुद उठाएको फोनबाट खड्काले त्यस्तो अपेक्षा सायदै गरेका थिए ।
‘को हो भन्नु न त ?’, खड्काले ठूलाे स्वरमा प्रश्न गरे ।
ती फोनकर्ताले खड्काको प्रश्नको ख्यालै नगरी आफ्नै कुरा लादे, ‘म यहीँ गोल्फुटार आएको थिएँ, यसो छ्यास्स छिरौँ कि भनेको ।’
यति सुनेपछि खड्काले फोन राखिदिए ।
म रेडियोमा काम गर्थें । त्यसैले त्यहाँ भएमध्येमा मतिर फर्किएर खड्काले भने, ‘रेडियोमा पनि अब फोन कन्भरसेसन र फोन ग्रिटिङबारे एउटा चेतनामूलक कार्यक्रम राख्नुपर्‍यो ।’
उनले अगाडि प्रश्न गरे, ‘विदेशतिर फोन आउँदा हेलो म फलानो बोल्दै छु भनेर ग्रिटिङ सुरु हुन्छ । हामीकहाँ के हो यस्तो ? चार पटक सोध्दा पनि नाम नै भन्दैनन् ।’
हामीकहाँ त यस्तै हो । यहाँको त के कुरा गर्नु । विदेशका कुरा गर्दा विदेशसँग दाँज्छस् भन्लान् ! सभ्यताको कुरा गर्दा धर्षण ठान्छन् ।
मेरो मोटरसाइकलको पछाडि बसिसकेका ती बुढालाई मैले कतै देखेको भए पनि नामले चिन्न सकिनँ । उनले मलाई चिन्न चाहेनन् पनि । बुढा ढसमस्स पछाडि बसेपछि मलाई पनि मोटरसाइकल चलाउन पट्यार लागिरहेको थियो ।
के गर्नु, उता जानु थियो । त्यहाँ पुगेपछिको एक्साइटमेन्टले निराशालाई दबाएँ ।
बुढाको व्यवहार सम्झँदा त त्यही देउरालीमा लगेर छाडेर जाऊँझैँ लागिरहेको थियो ।
बुढा कम अप्ठेरो गरी बसेका थिए र !
सासै रोकिने गरी कम्मरमा समातेका थिए ।
मोटरसाइकलमा यी बुढा र महिलाहरूलाई बोकेर हिँड्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ । कम डराउँदैनन् । डराउने मान्छे पछाडि बसेपछि न आफूले चाहेजस्तो गरी ढुक्कले मोटरसाइकल चलाउन पाइन्छ, न समयमा गन्तव्यमा पुगिन्छ । कहाँ झर्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा हिँड्नुपर्छ ।
आफैँले आफ्नो नाम बताए । भोजपुर बालाङ्खाबाट आएका रे ! अप्ठेरो मान्दै भने, ‘चिन्नेले ढाडे बस्नेत भनेर पनि चिन्छन् तर, नामचाहिँ गोविन्दबहादुर बस्नेत हो ।’
मलाई उनले पाएको उपनाम सुनेर हाँस उठ्यो । तर, कम्मरमा समातेको पीडाले हाँसोलाई ओठमा गाभ्न बाध्य भएँ । ‘ठिक्क पर्‍यो, यस्तालाई यस्तै नाम दिने हो,’ मनमनै सोचेँ ।
सेतो माटो लिन जाँदा माटोको ढिस्को खसेर ढाड सड्किएछ, भोजपुरमै हुँदा । एक वर्ष ढाड बाङ्गो पारेर हिँडेछन् । अहिले ढाड निको भएर दुई थाल भात हानेर लखर–लखर चार गाउँ चहार्ने भइसके, नामचाहिँ ढाडे नै छ ।
विशेषगरी पहाडी भेगतिर मान्छे नाम राख्न सिपालु हुन्छन् ।
आफ्नोबारेमा धेरै कुरा जबर्जस्ती सुनाए । अनि मतिर प्रसंग मोडेर भने, ‘यत्रो जवान छौ । भाइको यसो पिरेमसिरेम परेको होला नि ? मैले पनि जवानीमा थुप्रैसँग पिरेम गरेँ तर बिहेचाहिँ तीनवटीसँग मात्र भयो ।’
मैले हत्तपत्त लुकिङग्लासलाई ढाडे बुढाको अनुहार देखिने गरी सोझ्याएँ ।
बाफ् रे, तीनवटीसँग बिहे ! यहाँ एउटीलाई पाल्ने चक्करमा राहदानी विभाग र एयरपोर्टमा लागेको लाइन सम्झिएँ ।
बुढा ठूल्ठूलो आवाजमा बोल्थे । शंका गरेँ, ‘हैन ठर्रा पनि हान्या छ कि ?’ रक्सी खाको भए त गन्ध आउने थियो । त्यतिबेला मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ ।
बुढा फेरि एकोहोरो बोल्दै गए । खालि आफ्नै मात्र सुनाइरहे । निकै गफ हानिसकेपछि फेरि अर्को प्रश्न तेर्स्याए, ‘भाइको घरचाहिँ कहाँ ? के थरी हो ? कति जनाको परिवार ?’
यी बुढापाकाले पहिले नै थर सोध्छन् । मलाई अचम्म लाग्छ । थर नै किन सोध्या होला ? नाम सोध्दैनन् । थर, गोत्र, पहाड घर । उत्तर दिनै दिक्क लाग्छ ।
बुढापाका भएको कुनै घरमा पहिलो पटक गइयो भने त्यहाँ आउन सक्ने प्रश्नहरूप्रति म ज्ञात भइसकेको छु । ‘के थरी बाबु ? बुबाहरूको पहाड घर कहाँ ? के गोत्र ? बुबा के काम गर्नुहुन्छ ? आदि इत्यादि ।'
त्यसैले पनि म प्रायः आउन सक्ने प्रश्नको रेडिमेड उत्तर लिएर हिँड्ने गर्छु । नयाँ घरमा गएको बेला नमस्तेसहित सबै उत्तर फुकाइदिने, ‘नमस्ते हजुर म कुँवरको छोरा, गोत्र बत्स्य । पहाड घरचाहिँ भोजपुर हो । मलाई पहाड घर भोजपुर हो भन्ने थाहा छ तर म पुगेको छैन । घरमा चार जना छौँ । बुबाचाहिँ व्यवसाय गर्नुहुन्छ । म रामपुरमै जन्मेको रे । घरतिर सबैलाई सन्चै छ । यता सानो काम थियो र आएको ।’
यो बानीले एकातिर समय बचत हुन्छ भने अर्कोतिर अनावश्यक प्रश्नबाट छिट्टै छुटकारा पनि पाइन्छ ।
यस्ता ‘कमन क्वेसन्स’ बुढापाकाले मात्रै हाेइन, युवाले पनि गर्छन् । केही महिना काठमाडौं बसेर घर जांँदा प्रायः एकै खालका प्रश्न आउँछन्, ‘के छ खबर ? कहिले आएको ? अब कहिले जाने ?,’ यही हो प्रायःले सोध्ने ।
म 'के छ' भन्ने प्रश्न आउनेबित्तिकै आउनसक्ने थप प्रश्नको पनि जवाफ एकसाथ दिन्छु, ‘ठीकै छ, हिजो आएको, अब दुई/चार दिन बसेर जान्छु । उता पनि त्यस्तै छ, सबै पुरानो ।’
त्यसपछि सोधकर्ता ट्वाँ पर्छन् । अब के सोध्ने ? सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तर त प्रश्न नसोधी आइसके ।
मलाई अलि नयाँ प्रश्नहरू गरेको मन पर्छ ।
मैले ती बुढालाई पनि त्यसै गरेँ । तर, बुढाले मुख बन्द गरेनन् । सोधी नै रहे । मैले बीचैमा उनको कुरा काटेर प्रश्नको झट्टारो हानेँ, ‘तीनवटी त बिहे मात्रै गर्नुभएछ अंकल, मायाचाहिँ कति जनासँग गर्नुभयो ?’
‘अहिलेजस्तो चुम्माचुम्मीको जमाना थियो र उतिबेला ? छुयो कि कुह्यो । रोधी नाच्दा एउटीसँग आँखा जुधाइयो । मसक्क मस्किई । उतिबेला मयासाया लगाएर धेरै दिन टिक्न गाह्रो थियो । त्यसलाई आँखा मारेँ । दुई महिनापछि बिहे गरेँ । पहाडमा गरी खान धौधौ परेर बूढी उतै छाडेर तराई झरियो । तराईमा पनि एउटी भट्टराईकी छोरीले मया लाउने गरी हेरी । म पनि जवानीमा कमको थिएँ र ? तरुनी त लाइन लाग्थे लाइन । उनीहरू मलाई हेरेर एकोहोरिन्थे । तर, त्यतिबेला अहिलेको जस्तो खुला ठाउँबाट ठाडै हैन, लुकेर हेर्थे । बाहुनकी छोरी भएकाले म क्षेत्रीको बचेरोलाई मागेर दिने कुरा थिएन, त्यसैले भगाएँ । तराईतिरै राखेर फेरि पहाड गएँ । पहाडमा एउटी पुडासैनीकी छोरीसँग पहिलेदेखि नै पिरेम थियो । तर, भेटघाट धेरै भाको थिएन । मैले त्यसलाई पनि बिहे गरेँ । अरु पनि पाँच/सातवटीसँग लुकेर पिरेम गरियो । के गर्नु सबैलाई बिहे गरेर साध्य नहुँदो रहेछ,’ सरासर यत्रा कुरा भनेर बुढा गलल हाँसे ।
मैले पनि थोरै फिक्का हाँसो मिलाएँ । अनि फेरि सोधेँ, ‘अहिले सबै साथमै छन् त ?’
बुढा अलिक गम्भीर मुद्रामा उत्रिए, ‘छन् तर सम्झनामा । सबैले छाडेर गए । आज त दुईवटी छोरी छन् । तिनैले पालेका छन् ।’
‘अनि छोरा भएनन् र ?,’ लुकिङ ग्लासबाट उनको अनुहारको भाव नियाल्दै मैले फेरि सोधेँ । मन चसक्क पनि भयाे, कतै मैले नाजायज प्रश्न त गरिनँ ?
अहिले उनको अनुहार अलि मलिन भयो, ‘छोरा भएर के भो ? त्यही रोधीघरमा पट्टिएकीका मात्र छोरा भएनन् । पुडासैनीकी छोरीले चारवटा छोरा जन्माई । भट्टराईकी छोरीले तीनवटा जन्माई । अहिले ठूला भए । बढे, पढे र विदेश गए । मैले तिनीहरूका लागि गरेको मेहनतको तिनेरुलाई के मतलब र ? मेरो त वास्तै गर्दैनन् । कहाँ छ बाउ भनेर खोजीनिन्दासम्म गर्दैनन् । मैले तीनवटी बिहे गरे पनि उनीहरूमाथि खान, लाउन र पढ्न दिने कुरामा कहिल्यै अन्याय गरेको थिइनँ । मैले आफ्नो शरीर कुँज्याएर उनीहरूलाई लेखाएँ, पढाएँ ।’
यसो विचार गरेँ । मानिसहरू छोरा भएन भनेर गनगन गर्छन् । छोरा पाउन बल गरेर देशको जनसंख्या बढाउँछन् । आखिर छोराभन्दा छोरीले बढी माया गर्छन् आफ्ना आमाबुबालाई । छोरा निकै निष्ठुरी हुन्छन् । स्वास्नी ल्याएपछि जन्म र कर्म दिएको गुण र पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई कुल्चिदिन्छन् । हाम्रै समाजमा प्रशस्त उदाहरण छन् ।
‘अनि भाइका पनि त होलान् नि । ह्यान्डसम पनि छौ । एक्लो छोरा रहेछौ । बाइक पनि रै'छ । केटी त नहुने कुरै हुन्न,’ उनले कुरा मोडे ।
मलाई यस्तो कुरामा विश्वास लाग्दैन । मजस्ता ह्यान्डसमको यहाँ कुनै कमी छैन । मोटरसाइकल हुँदा मात्र पट्टिने केटी मलाई चाहिँदैन । मोटरसाइकल नहुनेहरूले पनि कति राम्रा–राम्रा केटी पट्याएका छन्, मैले ‘त्यस्तो हैन’ भन्ने खालको जवाफ फर्काएँ ।
बुढाले पत्याएनन्, ‘होली एउटी न एउटी त ?’
अलिअलि लाज लाग्यो ।
‘एउटी केटीले माया गर्छु भन्छे । मलाई पनि मन पर्छ,’ मैले जवाफ दिएँ ।
‘त्यसैलाई भेट्न हिँडेको होला हैन ?,’ बुढाले जिस्काउँदै सोधे ।
मैले ‘हैन’ भने ।
‘विचार गर्नु है फेरि फसिएला । सेकेन्डहेन्डमा परिएला,’ बुढाले त्रास देखाए । अहिलेका केटीहरूको विश्वासै हुन्न । बरु केटाहरूको केटी कम हुन्छन् तर केटीले धेरै केटा साथी बनाउँछन् ।
धरानमा मेरा भान्जा सरकारी अधिकृत छन् । उनकी छोरी राजविराजमा नर्स पढ्छे । अस्ति छोरी भेट्न थाहै नपाई गएको बेला कहाँ एउटा दमाईं केटासँग अँगालो हालीहाली घुमेको देखेछन् भान्जाले । मैले त पहिले नै भनिदिएको हुँ, बिहे गर्ने बेला भएकी छोरीलाई बाहिर नराख । अब देखे नि !’, उनले सुझाएको कुरा गर्वका साथ खुलाए ।
मैले सोचेँ, अहिले पनि के बिग्रियो त ? उसले मन पराएको केटा नै त्यही हो भने त्यहीसँग बिहे गरिदिए भैगो त । भन्नेले भन्लान्, ‘धेरै बिग्रिन्छ ।'
सायद केटो दलित भनेर परिवारले त्यसलाई जटिल रूपमा लिएका थिए । जमाना कहाँँबाट कहाँ पुगिसक्यो । समाज अहिले पनि पुरातनवादी चिन्तनबाट बाहिर नस्कन सकेको छैन । केटी उहीसँग खुसी हुन्छे, चोखो माया नै हो भने किन बिहे नगरिदिने ?
मेरो सोचाइ भंग गर्दै उनले थपे, ‘सपना पढ्न पनि तेज थिई !’ म झसङ्ग भएँ र हतारिएर सोधेँ, ‘नाम के रे ?’
उनले फेरि ठूलो आवाजमा भने, ‘सपना भण्डारी । नर्स पढ्दै छे ।’
मैले मोटरसाइकल रोकेँ । उनको गन्तव्य आइसकेको थियो फत्तेपुर ।
मोटसाइकलबाट ओर्लिएर उनले मलाई चिया पिउन प्रस्ताव गरे । बिहानकाे माैसम चिसाे थियाे । तर, म पसिना–पसिना भएको थिएँ । भने, ‘भैगो ।’
म निचोरेको निबुवाजस्तो लत्रक्कै भएँ । अचानक ममाथि कुनै वज्र प्रहार भएको थियो ।
मोटरसाइकल वा प्लेनमा छु भन्ने नै छुट्याउन हम्मेहम्मे परिरहेको थियो । आकाशमा दिउँसै ताराहरू देखिरहेको थिएँ । त्यो आकाश खस्दै छ कि जस्तो भइरहेको थियो । फेरि मोटरसाइकल अगाडि बढाउने जाँगर र साहस बाँकी थिएन ।
म स्तब्ध भएँ । एकोहोरिएँ ।
सोमबार त फत्तेपुर बजार लाग्छ । मानिसहरूको बाक्लो चहलपहल हुन्छ । त्यो भीडमा पनि म एक्लो थिएँ । सुनसान थियो मेरो वास्तविकता । भावशून्य भएँ म । किनकिन सारा सपनाको संसारमा आगो लागेजस्तै भयो । चित्त विप्लवले थचक्क परेँ ।
मोबाइलको घण्टी बज्यो । डढेको कल्पना र चकनाचुर भएको सपनाबाट एक्कासि ब्युँझँदा म थरङ्ग भएँ । मोबाइलमा म्यासेज आएको रहेछ ।
कतिखेर पठाएको म्यासेज थियो, नेटवर्कले भेटेकाले आइपुग्यो । हेरेँ ‘सपना बी’बाट आएको थियो ।
म्यासेज ओपन गरेँ, ‘हाइ डियर हाउ आर यू ? कतिखेर आइपुग्ने राजविराज ? आईएम वेटिङ । मिस यू अ लट एण्ड लभ यू । बाइ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १८, २०७७, ०८:२७:००